साझामाथि सरकारको झोकः ऐनविपरित सेयर लगानीमा पनि ब्याज ! – Saurahaonline.com
साझामाथि सरकारको झोकः ऐनविपरित सेयर लगानीमा पनि ब्याज !
सौराहा अनलाइन | २०७६, १३ माघ सोमबार
काठमाडौँ : यतिखेर साझा यातायात अन्योलमा छ । सरकारले साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिदका लागि दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै साझामा यस्तो परिस्थिति आएको हो ।
गत बिहीबार मन्त्रिपरिषदको निर्णयले विद्युतीय बस खरिदका लागि साझालाई दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सोे रकम ब्याजसहित असुल गरिने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म सरकारी निर्णयको पत्र भने साझामा पुगिसकेको छैन ।
यता, सरकारको यस्तो निर्णय आएसँगै पहिले नै घाटामा रहेको साझामा थप सङ्कट पैदा भएको छ । विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको साझामा सरकारले पूर्ण लगानी ब्याजसहित फिर्ता लिने भएपछि सकस उत्पन्न भएको हो । यतिखेर सरकारी लगानी फिर्ता जानेमा भन्दा पनि साझा लगानीको ब्याज तिर्नुपर्नेमा बढी सशंकित छ ।
गत साउनमा ३ सयवटा विद्युतीय बस खरिद गर्न भन्दै सरकारले साझालाई तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । पैसा उपलब्ध गराएको ६ महिना बितिसक्दा समेत साझाले बस खरिद गर्न सकेन । अहिले यही कारण देखाउँदै सरकारले साझासँग पैसा फिर्ता लिने नीति बनाएको छ । त्यो पनि अहिलेसम्मको ब्याजसहित ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु २०७७, १४ आश्विन बुधबार